Tsvaga maguta akanakisa pamhenderekedzo yePortugal | Bezzia
Misha inoyevedza pamhenderekedzo yePortugal
Susana Garcia | 19/05/2021 10:00 | Lifestyle, famba
Portugal inyika ine runako rwakawanda, netsika dzinoshamisa uye makiromita mazhinji emhenderekedzo yegungwa izvo zvinoita kuti ive imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushandisa zhizha. Kune dzimwe nzvimbo dzinozivikanwa dzemahombekombe, senge iri muAlgarve, asi ine zvakawanda zvekutsvaga, senge kuchamhembe kwemahombekombe nemataundi ayo akafanana neaya eGalicia kana nzvimbo yepakati, kwatinoona vatashanyi vanozivikanwa nzvimbo.
Tichaona mamwe emataundi anonakidza atinogona kushanyira kana tichifamba nemhenderekedzo yePortugal. Iyi yemahombekombe ine zvakawanda zvekuona uye kutora dhiraivha pamwe iri zano rakanaka. Iyo ndeimwe yenzendo dzakanakisa dzinogona kuitwa muPortugal.
Viana do Castelo ndeimwe yenzvimbo huru dzekushanyira kumaPortugal kuchamhembe kwemahombekombe. Iri taundi diki rine gungwa asi zvakare rine nzvimbo zhinji dzekuona. Pamusoro pe mugomo tinogona kuona kereke yeSanta Luzia, chivakwa chakasarudzika chine purani yakaenzana ine maonero anoyevedza egungwa neguta. Pane imwe nguva muguta, unogona kuenda kuchiteshi kuti uone Ngarava yeGil Eanes, chikepe chekare chechipatara kwaunogona kuona midziyo yavaishandisa. MuViana do Castelo tinogonawo kushanyira chokoreti miziyamu.
Iri taundi diki riri mudunhu rePorto uye yaimbova nzvimbo yakatsaurirwa kuredza. Mutaundi tinokwanisa kuona imwe yema fortress ekuchamhembe, inozivikanwa kufanana nenhare yaNossa Senhora de Conceiçao. Imwe yemapoinzi anogona kuoneka ndeye Iglesia da Lapa, diki asi iine runako rwakawanda. Pedyo nenhare tinoona chivakwa kumukadzi wehove. Iyi huwandu hwevanhu nhasi ine yakawanda yekushanya nekuda kwemahombekombe ayo.
Aveiro's population is inozivikanwa sePutukezi Venice yemigero yayo, iyo yaishandiswa pakutengesa munguva yakapfuura. Moliceiros zvikepe zvine mavara zvekuti mazuva ano zvinofadza vashanyi nekuvatora kuburikidza nemigero. Dhorobha rine maficha akanaka. Tinogona zvakare kuona iyo Aveiro Museum iri muConvent yaJesu uye neCatedral da Sé de Aveiro. Munzvimbo ino haufanire kupotsa mahombekombe eCosta Nova neBarra beach.
Iyi ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kushanya pamhenderekedzo yePortugal. Figueira da Foz ine mahombekombe akanaka uye akazara sa praia da Caridade. Munzvimbo ino tinogona zvakare kuona dzimwe nhare dzakadai seBuarcos neSanta Catarina. Munzvimbo yemaguta mune Muzinda weSotto Meya, fashoni yechiFrench uye ine mapindu akanaka. Iyo kasino ndeimwe yeakakosha mapoinzi ayo anokwezva vashanyi vazhinji.
Iyi imwe imba inonakidza inofanirwa kushanyirwa. Mumusika wemisiparati tinogona kuona mhando dzese dzechikafu uye iyo Visconde da luz gadheni inzvimbo yekufamba pakati petaundi. Iyo promenade uye mahombekombe eRainha kana da Ribeira ndiwo akanyanya kunakidza mapoinzi. Isu tinofanirwawo kurasika mutaundi rayo rekare uye toona, semuenzaniso, Seixas Palace kana nhare yekare.
La Vagari veLagos vari munzvimbo yeAlgarve, kumaodzanyemba kwePortugal. Iyi ndiyo imwe yenzvimbo dzinotenderera muPortugal. Iwo maPonta da Piedade mawere akanaka kwazvo uye nzvimbo yechisikigo inofanirwa kuonekwa. Munzvimbo ino mune zvakare Meia Praia, rimwe remabhichi aro makuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Misha inoyevedza pamhenderekedzo yePortugal
Tricks yekuwana tan ine hutano
Ungave sei noutano hwakanaka hwetsoka